That's so good, right?: The Shoplifter
ကမ္ဘာကြီးဟာရွာတစ်ရွာဆိုရင် အတော်ကြီးတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာပဲဖြစ်မည်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးမှာ တော့ အဆင့်မြင့် Apartment တွေ၊ Condo တိုက်ခန်းတွေက အပြိုင်းအယိုင်းပါပဲ။
နေထိုင်ရာ ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းကဆင်းလိုက်ရင် မြင်နေရမဲ့မြင်ကွင်းတွေက နေထိုင်စားသောက်မှု ဆိုတဲ့စကားထဲမှာပါတဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ၀ယ်ခြမ်းစားသောက်နိုင်မယ့် Super market ကြီးတွေ၊ Department Store တွေက လက်ညှိုးထိုး မလွဲပါဘူး။
လမ်းမပေါ်မှာလည်း လူတွေလူတွေ ပျားပန်းခတ်မျှ အဆင်အသွေးစုံ။ အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်၊ အစာအလို့ငှာ၊ အပျော်အတွက် သွားလာနေလိုက်ကြတာလေ။
ကျွန်တော့်နံဘေးကိုငဲ့ကြည့်မိတော့ ကျွန်တော့်ကိုချစ်မည့်သူ ကျွန်တော်ကချစ်ရမည့်သူမရှိ နတ္ထိ။ အရာရာတိုးတက်နေကြ အလွယ်တကူရရှိနေကြတဲ့ အခုခေတ်ထဲမှာ လူတွေတောင် ရယ်ဒီမိတ်ဖြစ်ကုန် ကြပြီထင်ပါတယ်လေ။ တစ်ခါတစ်လေများတော့ တွေးမိပါတယ် ရည်းစားထားတာတောင် ရယ်ဒီမိတ် လေးက ပိုကောင်းသလားလို့ပါ။
ပန်းသီးလေးက နီရဲရွှန်းစိုနေတာပဲ။ အိမ်ကရေခဲသေတ္တာထဲ အဆင်သင့်ဖြည့်ထားပေးပြီးသားဆို ပိုမကောင်းဘူးလား။ မင်းအတွေးခေါင်နေတာပါလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆိုဖူးပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.....ကျွန်တော်ကတော့ အခုလောလောဆယ်ကိုင်တွယ်ရေဆေးနေတဲ့ ဈေးကကိုယ်တိုင်ဝယ် လာတဲ့ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ ပန်းသီးလေးရဲ့ အရသာကစွဲမက်ဖွယ်အပြည့်လို့ ယုံကြည်ဆဲပါ။
ကျွန်တော့်ကော်ဖီတွေ အေးစက်ပြီးပျစ်ချွဲကုန်ပြီ။ မော်နီတာကို လွန်ခဲ့တဲ့လေးနာရီကတည်းက စောင့်ကြည့်နေတာ ဘာလှုပ် ရှားမှုမှ အထူးတလည်မမြင်ရပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့် ရက်သတ္တပတ်နေ့တွေရဲ့ မနက် ခင်းတွေကို အမုန်းဆုံးဖြစ်နေရ တာ ထုံးစံလိုကိုဖြစ်နေရပြီဆိုပါတော့။
'Security scan zone 4, Security scan zone 4'
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောသံ ပီအေပေါ်ကတစ်ဆင့်ကြားနေရတယ်။
မော်နီတာအများကြီးထဲကမှ show zone4ပေါ်မျက်စိအကြည့်တွေလိမ့်လိုက်တယ်။ အ၀တ်အစားတွေရောင်းတဲ့ဘက် အခြမ်းကပါ။ အဲဒီနေရာက ဘာများဖြစ်လို့ပါလိမ့်။ သေချာသလောက်ကတော့ တစ်ယောက်ယောက် မဟုတ်တာလုပ် တာကို ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက သံသယ၀င်လို့ အသိပေးအော်ခြင်းဖြစ်မည်။ ကင်မရာကို ပတ်ပတ်လည်လှည့်ပြီးကြည့်တော့ လည်း ဘာမှထူး ခြားမှုမရှိသာမန်အတိုင်းပါပဲ။ ခပ်ပါးပါးလိုက်ကာတွေ ချထားတဲ့ အ၀တ်အစားလဲခန်းဘက်ကို ကင်မရာ zoom ဆွဲပြီး check ကြည့်ပြန်တော့ဘာမှမဖြစ်။
သက်သက်သံသယ၀င်တာပဲဖြစ်မှာ။ ကင်မရာ zoom ကို ပြန်ချုံ့၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့်အကြိုက် လူငယ်တွေ နှစ်သက်တဲ့ အ၀တ်အစားဖက်ရှင်ဆိုင်တွေဘက်ခြမ်းက အ၀တ်အစားလဲခန်းတွေဘက်ရွှေ့ကြည့်မိတော့ နည်းနည်းအာရုံစိုက်စရာရ သွားတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဂရုတစိုက်ကြည့်မိတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီခပ်ပွပွဝတ်ထားပြီး လက်ထဲမှာလည်း T-Shirt တစ်စုံ ကိုကိုင်ထားတဲ့ ကောင်ကလေးတစ်ယောက်...။
အင်း.....သူက ကျွန်တော့်အကြိုက်ပုံစုံမျိုးလေးပါ။ထိုင်ခုံပေါ်အေးအေးဆေးဆေးမှီပြီး သူဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာကြည့်မိ တော့ သူ့မျက်လုံးတွေဟာ မသင်္ကာစရာကောင်းအောင်ပဲ နေရာအနှံ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်။ သူတစ်ခုခုများ လုပ်မလို့လား။ Store ရဲ့တစ်ခြားထောင့်က ကင်မရာတစ်လုံးကနေပြောင်းကြည့်ပြန်တော့ အဲဒီကင်မရာရှိရာဘက်ကို သူမျက်လုံးဝေ့ ကြည့် သေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကင်မရာဘယ်မှာ ရှိမှန်းမသိရှာဘူး။ 'နုသေးတယ်' ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ ဒီကောင် လေးဟာအတွေ့အကြုံနုသေးတာပဲဗျ။
ကျွန်တော် zoom ကို တဖြည်းဖြည်းချို့ကြည့်ရင်း မောနီတာနား နှာခေါင်းနဲ့ထိလောက်အောင်တိုးကြည့်လိုက်တော့ Damm... ဒီကောင်လေးဟာ မကောင်းဆိုးရွားကောင်လေးပဲဗျ။ အ၀တ်အစားလဲခန်းဘေးနားက တီရှပ်ကောင်တာက T-shirt နှစ်ထည်လောက်ကို သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီခပ်ပွပွထဲ ထိုးထည့်ပြီးပြီ။ ပြီးတော့ မသိမသာနှင့် ထွက်ပေါက်ရှိရာဆီလှမ်း နေပြီ ခြေလှမ်း တွေကလေ။ ကျွန်တော်ထိုင်ခုံကနေ ထခုန်ပြီး သူရှိရာဘက်ခြမ်းကို လိုက်ဖို့ပြင်ရသပေါ့။
သူ့ခြေလှမ်းသွက်သွက်တွေကြောင့် မကြာခင်ထွက်ပေါက်ရှိရာရောက်တော့မယ်။ 'come on ..come on' ကျွန်တော့် ခြေထောက်တွေကို ခပ်သွက် သွက်လှမ်းရတယ်.. အမိရဖို့ဖမ်းမိဖို့။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် သူ့ကိုမိဖို့လိုအပ်တယ်တာဝန်အရ။ တခြားမသိစိတ်က သူ့ပြုမူချက်ကို မဆန့်ကျင်ဘဲ လွှတ်ပေးချင်နေ မိတယ်။ ကောင်တာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ ငပျင်းစားရေးမက တခြားတစ်ဘက်ကို ငေးကြည့်နေလေရဲ့။ တီဗီက သူတို့အကြိုက် မင်းသားရဲ့အင်တာဗျူးလာနေတာကို မျက်နှာမူနေတာ ခြေလှမ်းတွေသွက်ရုံမက ပြေးလိုက်ရပါတော့တယ်။
သူတစ်ချက်လောက် ကျွန်တော်ရှိရာစီစောင်းကြည့်ပြီး ပြေးပါတော့တယ်။ ဒီမျိုးမစစ်လေးရဲ့ မျက်နှာကတစ်ချက်စောင်း ကြည့်တာနဲ့တင် မှတ်မိလောက်တဲ့ရုပ်ပဲ။ ကျွန်တော့်လက်က ပြေးမလွတ်နိုင်ပါဘူးလေ။ ထွက်ပေါက်ကနေပြေးသွားတဲ့ သူ့နောက်ကိုလိုက်ရင်း ဘာမျှမရှိတဲ့ ကားပါကင်ထဲကဖြတ်ပြေးလိုက်ရပါတယ်။ ဘေးမှကြည့်နေသူအချို့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေ အရ ဒီကောင်လေးရဲ့ တည်နေရာကို ညွှန်ပြခဲ့တာပေါ့။
ကွေ့ကောက်စွာရပ်ထားတဲ့ ကားတွေကြားကဖြတ်ပြေးကာ နောက်ဖေးလမ်းကြားထဲထွက်ပြေးသွားတယ်။ သူ့ကိုမိဖို့ခြေ လှမ်းနည်းနည်းပဲလိုတော့တာ။ ဒီလမ်းကြားထဲ ဘယ်သူမှမရှိသလို ဘယ်သူမှလည်းမလာ ဘူး။ အိမ်ခြေယာခြေမဲ့တွေပဲ တစ်ခါတစ်လေတွေ့ရတတ်တာ။ ကျွန်တော် နေရာလပ်မကျန် ကျီးကန်းတောင်းမှောက်ကြည့်ရင်း အတန်ကြာရပ်တန့်ရှာ ဖွေကြည့်မိတယ်။
'ဘယ်မှာပုန်းနေလဲ မင်းထွက်ခဲ့နော်၊ ယူသွားတာတွေပြန်ပေးရင် ငါမင်းကိုဘာမှမလုပ်ဘူး'
ကျွန်တော် အမှိုက်ပုံးအဖုံးကို မကျေနပ်စွာ လှမ်းကန်လိုက်မိပြီး မကြာခင်မှာ နောက်ဖက်နားက လှုပ်ရှားသံ သဲ့သဲ့ကြားရ တယ်။ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တောက်ပတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံက မှောင်ရိပ်နားကချောင်းကြည့်နေလေရဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အပြင်ထွက်လာခဲ့တယ်။ သူကအရပ်အတော်ရှည်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ အနည်းဆုံး၆ပေ၀န်းကျင်ရှိမယ်။ ကောက်တိကောက်ကွေး ဆံပင်ကို High Light လုပ်ထားသေး၊ မျက်လုံးတွေက တိမ်းမူးဖွယ် ဆွဲငင်မှု အပြည့်ဖြင့်....အို.. ကျွန်တော့်အသက်ရှူသံတွေတောင်မှားသွားသလိုပဲ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်မေ့သွားရတယ် သူဟာ အလစ်သမား တစ်ယောက်ဆိုတာ။
အစုတ်အပြဲတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ သူ့အင်္ကျီအောက်မှာ မတန်မရာကိုပဲ ကြွက်သားတွေနဲ့ အပြည့်ပါလား။ ကျွန်တော့်လက် ချောင်းလေးတွေနဲ့ သူ့ကို စမ်းကြည့်ပြီး သာယာမိတယ်။ ဘောင်းဘီထဲက ကျွန်တော့်ညီဘွားက အစာတောင်းစပြု လာပါပြီ တရမ်းရမ်းနဲ့။ ဒီကောင်လေးစီက အရသာတစ်ခုရချင်ပြီထင်ရဲ့။
ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ သူ့အသံကြောင့် ကျွန်တော့်လက်တွေအဖြစ်အပျက်ကာလကို ပြန်လှမ်းလျှောက်မိရတယ်။
သူ့တုန့်ပြန်သံတွေက ငါးမျှားချိတ်မှာ ငါးစာတပ်နေတဲ့အတိုင်း။ အလာကြီးပါလား။
သူကျွန်တော့်ကို ခဏစိုက်ကြည့်ပြီးနောက် ခပ်ပွပွဂျင်းဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။ ဘောင်းဘီထဲထိုး ထည့်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အလေးချိန်ကြောင့် ဘောင်းဘီဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်လျှောကနဲ။
'လာလေ...လာယူပါ' ညစ်ကျယ်ကျယ်အပြုံးနဲ့လှမ်းပြေလေရဲ့။ သူ့ကိုယ်သူအတော်ဟုတ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့လေ။
ကျွန်တော် သူ့ဆီလျှောက်လှမ်းသွားရင်း ဘောင်းဘီကြားကျနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ သူ့ရွှေနီငှက် ပျောသီးကြီးဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာနဲ့ တန်းကနဲ။ ယောင်ရမ်းပြီး နှုတ်ခမ်းကိုလျှာနဲ့သရပ်မိ တယ်။ သူ့.....သူ့ရွှေနီငှက် ပျောရဲ့ အရသာကိုလိုချင်မိတာ အရမ်းပါပဲ။ မျက်ဝန်းထောင့်ကတွေ့လိုက်မိ သေးတယ်လေ သူ့ရဲ့ ချစ်စရာပစ္စည်း ရဲ့ထိပ်မှာ အရည်ကြည်လေးတွေစို့ထွက်နေတာကိုပေါ့။
'You know you want it!'
ကျွန်တော်ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူး။ ဒူးထောက်လိုက်မိရပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာဟာ ကောင်စုတ်လေးရဲ့ ငပဲဆီကို ဦးတည် မိပြီပေါ့။ သူ့ရဲ့တဖြည်းဖြည်းထောင်လာတဲ့ အရာက ခေါ်ငှင်စပြုပြီ ...လာပါ....လာပါတဲ့။ နှုတ်ခမ်းတွေကို အသာဖွင့် သူ့ငပဲ ကို ရွှတ်ကနဲစုပ်ယူလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကတော့ သူ့ရှပ်အင်္ကျီအောက်ကို တွားဝင်လိုက်ကာ အဖုအထစ် တွေနှင့် သူ့ရင်အုပ်တွေကို အသာပွတ်သပ်၊ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိကာ အသာညှစ်မိလိုက်တော့ ပါးစပ်က ညည်း ညူသံအချို့ထွက်လာပါရော။ ပါးစပ်က အသံထွက်သလို သူ့ခါးကလည်း လှုပ်ရှားလာကာ တစ်ချောင်းလုံးအရင်းထိအောင် လည်ချောင်းထဲအရောက်ပို့ဖို့ သူကြိုးစားပါတော့တယ်။
'စပျစ်သီးလေးက အရာသာရှိမယ့်ပုံပဲ' တဲ့ ကျွန်တော်ပန်းသီးရွေးနေတုန်း ဈေးဝယ်သူတစ်ယောက်ပြောလိုက်သံကို ကြား လိုက်ရတယ်။ စပျစ်သီးဟာ အဲဒီလောက်ချိုသလား ၀ယ်စားရရင်ကောင်းမလား စိတ်က ယိမ်းယိုင်မိပါသေးရဲ့။
စပျစ်သီးတစ်လုံးရဲ့ချိုမြမှုဟာ ကျွန်တော့်သွေးသားထဲက တောင့်တတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးရဲ့ နူးညံ့ထွေးအိတဲ့ ချိုမြိန်မှုကို မေ့ပျောက်ရလောက်အောင် ရင်မခုန်စေနိုင်ပါဘူးလေ။
ဟော....ဟိုလူဝယ်သွားတဲ့ ပန်းသီးနီရဲရဲတွေဟာ အတော်ကောင်းမှာ။ ငါမ၀ယ်လိုက်ရဘူး။ နောက်ကျသွားပြီ၊ ဒီဆိုင်မှာ အဲဒီလောက်နည်းရလား ဒီပန်းသီးမျိုးတွေဟာ။ သူများပိုင်ဆိုင်သွားရတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးအတွက် ကျွန်တော်တမ်းတနေဖို့ မကောင်းခဲ့ပါဘူး။
အတော်သဘောကျစရကောင်းမိပြန်သည် သူများဝယ်ပြီးသား ပန်းသီးတစ်လုံးကို ငေးမောပြီး ထိုညနေက ကျွန်တော်ဘာမှ မ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့။
နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိတော့ တဖြည်းဖြည်းမာလာတယ်။ အဲဒီအခါ လက်ကိုအသာရုတ်ကာ ဗိုက်သားလေးတွေ၊ ဆီးစပ်ကအမွှေးလေးတွေကို ညင်ညင်သာသာပွတ်သပ်ပေးမိတာပေါ့။ သူ့ခါးကို အသာကိုင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ပါးစပ် ကိုအလုပ်ပေးနေတုန်း မျက်လုံးက ထွားအိတဲ့တင်သားစိုင်တွေကို အာရုံရောက်သွားမိရာ ကျွန်တော့်ညီဘွားက ခေါင်းတ ဖြည်းဖြည်းထောင်ထာလာတာ ပခြုပ်ထဲက မြွေဟောက်ခေါင်းထောင်ထလာသလိုပ။ ကောင်စုတ်လေးကို သောက်ရမ်း လိုးချင်လာပြီ။
ပါးစပ်က သူ့ငပဲကို ထွေးထုတ်လိုက်ကာ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တာပေါ့။ ကျွန်တော်က သူ့ထက်အရပ်နည်းနည်း ပိုရှည်တော့ နည်းနည်းအသာရပါတယ်။ သူ့ကိုအာငွေ့ပေးတာတော်လောက်ပြီ။ သူ့မျက်ဝန်းကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော် ပြုစုမှုတွေကို ငံ့လင့်နေတုန်း။ တုတ်ခိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေက သူ့ခါးကျဉ်းကျဉ်းကို အသာဆွဲကိုင်ကာ တစ်ဖက်လှည့် ခိုင်းတာမှာ နည်းနည်းတော့ အားစိုက်လိုက်ရတယ်။ သူက မလှည့်ချင်သလိုပေခံနေတာကိုး။
သူ့တင်ဖောင်းဖောင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို အသာဖိကပ်ထားရင်း လည်တိုင်ကျော့ကျော့ကိုခပ်ဖွဖွနမ်း၊ နားရွက်သီးလေး တွေကို လျှာနဲ့အသာရစ်ဝိုက်ကာ ကလိပေးမိပါတယ်။ သူ့ကိုအတင်းဖိထားတော့ အစပိုင်းမှာ တင်းခံနေပေမဲ့ ခဏအကြာ မှာတော့ အလိုက်သင့်အလျားသင့်ဖြစ်လာ ပြုမူလာပါရော။ နားရွက်ထဲလျှာနဲ့မွှေပေးတော့ သူ့ခမျာ တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားရတယ်။ မာထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲနှင့်သူ့ခရေပွင့်ကို ထိုးလိုက်ဖွလိုက်နဲ့ လှံထောက်တန်းကစားပေး နေမိတာပေါ့။ သန်မာတဲ့ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်က သူ့ခါးကိုညှပ်ကာ မရုန်းနိုင်အောင်ဖိလိုက်သလို တစ်ခြားတစ်ဖက် ကတော့ သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီထဲက ရုန်းထနေတဲ့ ငပဲကိုဇစ်ဖွင့်ကာ အပြင်ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခြေ ထောက်နှစ်ဖက်ကလည်း ခပ်ကားကားဖြစ်အောင် သူ့ခြေချောင်းတွေကြား အသာဝင်ရပ်လိုက်တယ်။ ကစားပွဲဝင်ဖို့ အနေ အထားအသင့်ပေါ့။ မာနေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို ခရေပွင့်ထဲ အသာထိုးထည့်ကြည့် တော့မရဘူး ကြပ်လိုက်တာ။ good တာ ပေါ့ ကျွန်တော့်အကြိုက်လေ။ တံတွေးနည်းနည်းဆွတ်ပြီး အသာထိုးထည့်လိုက်ကာ တဖြည်းဖြည်းနှဲ့ထည့်ပြန်တော့ ကောင်လေး ပါးစပ်ကိုဟပြီး အသက်ရှူပါရဲ့။ ဒီကောင်လေး အပြုအမူအရ ဒီလိုဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံဟာ သူ့အတွက် အဦးဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ရိပ်မိရတယ်။
ကောင်လေးဆီက စကားပြန်သံမကြားရပေမဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ပြတာကိုတော့ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတုန့်ပြန်မှုကလည်း မဆိုးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အားကိုသုံးပြီး အထုတ်အသွင်းအနှဲ့အပြု လှုပ်ရှားမှုကြားမှာ သူပါးစပ်လေးဟကာ မျောနေတာ။ 'အာ....အ....အား' ညှစ်အားသန်တဲ့ ကြွက်သားများကြောင့် မကြာခင်မှာ ကျွန်တော့်ဒူးတွေယိုင်ချင်လာသလို ပန်းထုတ်ဖို ဥထဲ ပြည့်စပြုနေပြီဆို တာ ရိပ်မိရတာကြောင့် ဆောင့်တာကို အရှိန်လျှော့ နောက်ကို အသာဆုတ်မိပါပေါ့။ ဒါကိုသူက အား မရစွာနောက်ပြန်လိုက်ဖိကပ်ကာ အဆုံးထိဖိကပ်လိုက် ဖွလိုက်လုပ်ပါတော့တယ်။
'ကျွန်တော့်ထဲ အစ်ကို့ဟာတွေနဲ့ ပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးပါ....အာ...အား'
ဒီတော့ဗျူဟာတစ်မျိုးပြောင်းရတာပေါ့ဗျာ။ ကောင်စုတ်လေးငပဲကိုအသာလှမ်းကိုင်လိုက်ကာ ခပ်ဖွဖွထုလိုက် ပြင်းပြင်းထု လိုက်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်လုပ်တာမှာ သူ့ပါးစပ်က ညည်းတွားသံထွက်လာသလို သူ့ခရေကြွက်သားတွေဟာလည်း ဟစိ ဟစိနဲ့။
'မြန်မြန်....မြန်မြန်' သူအားမရစွာအသံတွေထွက်ညည်းစပြုလာပြီပေါ့။ ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေးနောက်က အသာငြှောင့်ရင်း လက်ကလည်းထုပေးနေရာ သူ့တွေက ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ထိကပ်လာသလို သူ့ခရေကြွက်သားတွေက ကျပ်နေ အောင်ညှစ်ပါတော့တယ် ကျွန်တော့်ညီဘွားကို။ လေးငါးချက်လောက် ထုပေးအပြီးမှာတော့ တဆတ်ဆတ်ခါရမ်းသွားတဲ့ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အတူ ပူနွေးပျစ်ချွဲတာတွေ ကျွန်တော့်လက်ထဲက တစ်ဆင့် စိုရွှဲကုန်ပါရော။ ကျွန်တော်သည်လည်း မထိန်း နိုင်လှစွာ လေးငါးချက်ခပ်ပြင်းပြင်းထပ်ဆောင့်လိုက်ကာ တန်းကနဲ တန်းကနဲ ပန်းထုတ်ပစ်ပါတယ်။
ခြေတွေလက်တွေ သာခွေယိုင်ဖြစ်လောက်အောင် အရိပ်အခြေပြမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လောက် လှေလှော်ခဲ့မိတယ်ဆို တာ ပြန်သိရတယ်။ ခရေတွင်းထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့ ညီဘွားကိုအသာအယာစွဲထုတ်ကာ တီရှပ်တစ်ထည်နဲ့ဆွဲသုတ်လိုက် ပါတယ်။ သူ့ခမျာလည်း နံရံကိုအသာမှီကာ အမောဖြေနေရဲ့။ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီတွေ အင်္ကျီတွေအသာပြန်လျှိုရင်း သူ့ကိုကြည့်မိတော့ ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ပြန်ရှုပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို။ ညီဘွားကိုသုတ်ပြီးညစ်ပတ်နေတဲ့ တီရှပ်ကို သူ့ဆီပစ်ထည့်လိုက်ရင်း.....
'ငါမင်းကို ဒီစတိုးထဲ နောက်တစ်ခါမမြင်ချင်ဘူးနော်'
'နောက်တစ်ခါဆိုရင် ငါ့လိုမဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားမန်နေဂျာက အရေးတကယ်ယူမှာ'
နောက်ပြန်လှည့်ကာ စတိုးဆိုင်ရှိရာကို လှည့်ပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။
သိနေသလိုပဲ ဒီကောင်လေးဟာ ဒီလိုလုပ်နေခြင်းဟာ အဓိကအကြောင်းအရာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ။
မှောင်လိုက်လင်းလိုက် လည်ပတ်နေတဲ့ နေ့ညတွေဟာ ကျွန်တော့်ခုတင်ဘေးက သဲနာရီပုံစံကိုယ်လုံးနဲ့ မော်ဒယ်လ်လှလှ တစ်ယောက် ကိုင်တွယ်ထားတဲ့ ကြည့်မှန်တစ်ချပ်ထဲမှာ ပေါ်ချည်ပျောက်ချည်။
စာကြည့်စားပွဲပေါ်က အုပ်ဆောင်းလေးထဲမှာ ခွဲစိတ်ပြီးစ ပန်းသီးစိတ်အချို့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မင်းစားဖို့ဆိုပြီး ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်။ အခုထိမစားဖြစ်သေးဘူး။
အလွယ်တကူရရှိတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်ပျက်ပြီး ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်က အလုပ်သစ်အတွက်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ လူဆိုတာ အလွယ်တကူရရှိတဲ့အရာကို တန်ဖိုးမထားကြဘူးဆိုတာ ဟုတ်မှာပဲ။ အလကားရသည့်ပစ္စည်းမဆိုထားနှင့် ရေ တစ်ခွက်ကိုပင် အလကားရသည့်အရာဆို ဘမ်းကနဲ ပက်ဖြန်းလိုက်သည်သာ အလိုမရှိစွာဖြင့်လေ။
မိုးပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ နီယွန်မီးများနဲ့မတူ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်လေးတွေ တလက်လက်တောက်ပနေတယ်။ လမင်းကြီးက ဘယ်မှာလည်းမသိ။ လမင်းကြီးကတစ်ခုတည်း ကြယ်ကလေးတွေက အများအပြား၊ ကြယ်ပွင့်လေးများစွာ ထဲက တစ်ပွင့်ခူးဆွတ်ကာ နံရံထက်က ကြယ်ပုံ နံရံကပ်ကြွေပြားစီတပ်ဆင်လိုက်တာကပိုကောင်းသည်။
ဟူး.....အသက်ရှင်မှု၊ နေထိုင်စားသောက်မှုများနဲ့ ကမ္ဘာ့ရွာကြီးထဲ ကျွန်တော်မှောင်လိုက်၊ လင်းလိုက်ဖြစ်နေရဦးမည်။
Wrote by Alex Aung (5.1.2010)